Vanasorojena muZanu PF Voratidza Masimba Avo kuMakurukota eHurumende
Chikunguru 04, 2021
OBERT MPOFU ZANU PF PRESSER
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZanu PF pakati pavanasorojena mubato iri nevari muhurumende zvichitevera kusatevedzerwa kwemitemo inenge yadzikwa nevari muhurumende iyo isiri kutevedzerwa nevari kufambisa mabasa mubato iri.
Kupesana uku kwakabuda pachena apo gurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, vakati Zanu PF inofanirwa kutevedzera mitemo yeCovid-19 yekusaungana iyo yakadzikwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamwe nemutevedzeri wavo, uye vari gurukota rezvehutano, VaConstantino Chiwenga.
Vachitaura pamusangano wavakaita nevakuru vemapazi ehurumende pamwe nevamiriri vematunhu muparamende neMugovera muChinhoyi, VaZiyambi vakati bato reZanu PF harifanirwe kutyora mitemo yekusaungana sezvo pasina munhu kana bato riri pamusoro pemitemo
VaZiyambi vakataura mashoko aya mushure mekunge vabvunzwa nemumiriri weNorton muparamende, VaTemba Mliswa, kuti sei nhengo dzebato reZanu PF mumatunhu madiki dziri kuenderera mberi nekusarudza hutungamiri dzichityora mitemo yekusaungana pamwe nekusapfeka mamasiki.
Asi vakafanobata chigaro chasachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland West, VaAbia Mujeri, vanoti havasi kuunganidza vanhu sezviri kufunga vamwe vanhu sezvo vakatopedza kusarudza hutungamiri hwemasero nemabhuranji.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti Zanu PF yakadaidzira kuti matunhu ayo aite hurongwa hwema district coordinating committees, uye bato iri riri kuita misangano yaro munguva yeLockdown, panguva iyo hurumende yakarambidza kuungana kwevanhu.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika, uye vari mukuru wePlatform for Youth and Community Development, VaClaris Madhuku, vanoti pave nekudhonzerana pakati penhengo dzebato reZanu PF dziri muhurumende nedzisiri muhurumende dzakaita semukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaObert Mpofu, pamwe nevakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato iri, VaPatrick Chinamasa.
VaMadhuku vanoti izvi zvinonyanya kuonekwa apo VaMpofu vakazivisa kuti kupwanywa kwezvivakwa kumbomiswa.
VaMadhuku vanoti izvi zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, havana simba rinodarika bato.
Izvi zvatsigirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaRejoice Ngwenya, avo vanoti bato reZanu PF ndiro rinotaurira hurumende zvekuita, uye ndiro rinoronga gwara rinofanirwa kutevedzwa nevari muhurumende.
Asi vanoti kupesana kwegara rinobva kuZanu PF sebato negwara rinobva kuhurumende zvinoratidza pane kudhonzerana kwake kwake.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti hapana kukakatirana sezvo pasina chakaipa kuti vakuru vakuru mubato vape gwara kuhurumende sezvo vachishandidzana.
Mwedzi wapera dare remakurukota rakabuda nechisungo chekuti dzimba dzeku Solomio dziputswe, asi izvi zvakazomiswa mushure mekunge vanasorojena vemuZanu PF vapindira.
Gurukota rezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe, vakazivisa nemusi weChishanu kuti munyika mucharamba muine Lockdown nepamusana pechirwere cheCovid-19 uye misangano haisi kubvumidzwa kuitwa.
Hurumende yakatara mitemo yekuti hapana vanhu vanobvumirwa kuungana munguva yeLockdown, asi vanasorojena muZanu PF vari kuenderera mberi vachiita misangano yavo – uye hapana kana akasungwa kana kurambidzwa kuita misangano iyi nemapurisa.
Misangano iyi inonziwo mimwe yacho yaiva nemhirizhonga, izvo zvakazoona vaive murongi wemisangano iyi, VaVictor Matemadanda, vachibviswa pachigaro ichi, icho chiri kufanobatwa naVaChinamasa.
Dzimwe nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti makakatanwa ari muZanu PF anoratidza kuti VaMnangagwa havana simba rakawanda kubato serakanga riina vaimbove mutungamiri webato iri mushakabvu Robert Mugabe, avo vakazobviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017.
Mutsauko uripo zvakare ndewekuti munguva yaVaMugabe, vese vaive vakuru vakuru muZanu PF, vaive nhengo dzedare remakurukota izvo zvaiita kuti kana kuine kupokana, kupokana uku kusanyanye kubuda pachena sezvo zvinhu zvaitangwa zvawiriranwa kubato, zvozoendeswa mudare remakurukota kuitira kuti zvitambirwe zviri pamutemo sezvisungo zvehurumende.